मोदीको हत्याको षडयन्त्रः के हो त यसको वास्तविकता? – Nepal Journal
मोदीको हत्याको षडयन्त्रः के हो त यसको वास्तविकता?
Posted By: Nepal Journal June 13, 2018 | ३० जेष्ठ २०७५, बुधबार १२:१३
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्या गर्ने षडयन्त्रको चर्चा यतिबेला मिडिया र सोशल मिडियामा तीव्र भइरहेको छ । तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण भने पर्याप्त छैन, जसबाट उक्त कुरालाई आधिकारीक र प्रमाणिक मान्न सकियोस् ।
केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ र उनीहरुबाट बरामद चिठ्ठीबाट नक्सलवादी (भारतीय माओवादी) ले मोदीको हत्या गर्ने योजना बनाएको भनेर दावी गरिएको पाइएको छ ।
यस मामलामा राजनीतिक बयानबाजी जारी रहेको छ । जहाँ बीजेपी र विपक्षी पार्टीका नेताहरुले एक अर्कामा राजनीति गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर आधिकारीक रुपमा पर्याप्त जानकारी प्राप्त नभएको बताइएको छ ।
दिल्लीमा सोमबार प्रधानमन्त्रीमाथि माओवादीको हमलाको षडयन्त्रलाई लिएर गृहमन्त्रालयले आन्तरिक सुरक्षाको समीक्षा गरेको छ ।
पक्राउ गरिएका मानिसहहरुलाई माओवादीहरुको सम्पर्क सूत्र र उनीहरुको शहरी नेटवर्कको हिस्सा बताइएको थियो र उनीहरुसँग जुध्नका लागि एउटा योजना पनि तयार गरिएको बताइएको छ ।
पत्रमा यस्तो लेखिएको छ
गत जनवरीमा भीमा कोरेगाउँमा भएको हिंसाका क्रममा पक्राउ परेका पाँच जनामध्ये रोना ज्याकब विल्सनको दिल्लीस्थित घरबाट हत्याको षडयन्त्रसम्बन्धी पत्र फेला पारिएको हो । सो पत्रमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले बिहार र पश्चिम बंगालमा हारे पनि १५ भन्दा बढी राज्यमा जितेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ‘कमरेड प्रकाश’ लाई सम्बोधन गर्दै सो पत्रमा लेखिएको छ, ‘मोदी राज अन्त्य गर्नका लागि कमरेड किशन र केही अरू वरिष्ठ कमरेडहरूले ठोस कदम चाल्न सुझाव दिनुभएको छ । हामी राजीव गान्धीको हत्या गरिएजस्तै योजनाबारे विचार गरिरहेका छौँ ।’
कांग्रेस आईका नेता सञ्जय निरूपणले मोदी र भाजपाको लोकप्रियता घट्दा यस्ता प्रचारबाजी गर्ने गरिएको दावी गरेका छन् । बीबीसी
Be the first to comment on "मोदीको हत्याको षडयन्त्रः के हो त यसको वास्तविकता?"